Maamulka RakaRaaxo “Waan ku guuleysanay in Aan kala qaadno Beelihii Dagaalamay” – SBC
Maamulka RakaRaaxo “Waan ku guuleysanay in Aan kala qaadno Beelihii Dagaalamay”
Posted by Webmaster on October 2, 2011 Comments
Shantii maalin ee ugu dambeysay waxaa qeybo ka mid ah gobolka Karkaar ee Puntland waxaa ka taagnaa xiisado colaadeed oo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wada dega deegaanka kuwaas oo dhaliyay Khasaare dhaawac iyo mid dhimasho.
Deegaanada ay ka taagnaayeen Xiisada colaadeed waa deegaano hoostaga degmada Rako ee gobolkaas, Gudoomiyaha Degmada Rako Raaxo Faarax Maxamuud Ibraahim ayaa Sheegay in xaalada colaadeed ee gobolka ay iminka tahay mid hakad ku jira ka dib markii ay ku guuleysteen in ay kala qaadaan maleeshitaadka labadii beel ee walaalaha ahaa.
Waxa uu gudoomiye Faarax sheegay isagoo lahadlayay Barnaamijka Xulka wararka ee ka baxa Idaacada SBC International in halkaasi ay ku bexeen ciidamada Police-ka Puntland iyo qaar ka mid ah Waxgaradka iyagoo halkaasi xoog ku galay islamarkaana kala qaaday labadii dhinac ee is hayay.
Waxa uu intaasi raaxiyay gudoomiyuhu in xaaladu ay iminka degentahay ayna arintu u kala direen doyaasha labada beel islaamarkaana ay soconayaan waan waan iyo dadaalo loogu jiro sidii loo soo afjari lahaa dagaalada halkaasi ka jira oo ay labada beelba si nabad ah u wada daaqirahaayeen sida uu hadalka u dhigay.
Waxay aheyd maalmo ka hor markii halkaasi uu ka bilowday dagaal u dhexeeya labadan maleeshiyo kaas oo sababay khasaare dhimasho 1 qof ah halka ay ku dhawacmeyn dad kor u dhaafaya 14 qof oo ka wada tirsan labada beel.